अर्थतन्त्र उजाड, सेयर बजारमा हरियाली - Prahar News
अर्थतन्त्र उजाड, सेयर बजारमा हरियाली
१९ भाद्र २०७७
कोरोना महामारीका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटमा रहेका वेला अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा भने हरियाली छाएको छ । लकडाउनका वेला बन्द रहेको सेयर बजार खुलेपछिका दुई महिनामा सेयर बजार ३ सय ३२ अंकले बढेको छ । १५ असारमा ११ सय ७८ अंकमा रहेको नेप्से बिहीबार १५ सय १० बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से सूचकमा मात्रै होइन, दैनिक कारोबार रकम पनि पाँच महिनायताकै उच्च ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऐतिहासिक रूपमा कमजोर हुँदै माइनसमा जाने सम्भावना छ । ६ महिनादेखि लगातार आर्थिक गतिविधिमा अवरोध हुँदा कृषिबाहेककै क्षेत्रबाट २५ देखि ३५ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेको अनुमान छ । त्यति मात्रै होइन, सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफाको दर पनि तीव्र रूपमा घटेको छ । बैंकहरूले बाँड्ने प्रतिफल दर १८ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झरेको छ । समग्र अर्थतन्त्र मात्रै होइन, सेयरमै लगानी गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफल घट्दासमेत बजार गुल्जार भइरहनु भने आश्चर्यको विषय हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटेको तर लगानीको अन्य क्षेत्र खुम्चिएका कारण सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘तरलताकै कारण सेयर बजार छ, तर यसमै मात्रै आधारित भएर बजार बढ्नु ठीक हो वा होइन, मेरो बुझाइभन्दा बाहिर छ,’ उनले भने ।
शुक्रवार, भाद्र १९ २०७७१०:३३:०३
ओली समूहमा खुल्ने गौतमको तयारी, बामदेवले मागेको यो पद दिने सहमति !
नेपालमा पनि भेटियो नयाँ प्रजातिको कोरोनाभाइरस, ३ जनामा पुष्टि !
प्रचण्ड र माधव मिल्दा पनि ओली समूह बलियो, स्थानीय तहमा शतप्रतिशत बहुमत !
वामदेवका निकट व्यक्ति नै फर्किए ओली समूहमा, यसरी पुराउदै छन् पार्टी भित्रै दुईतिहाई !
संसद पुनर्स्थापना तर्फ मोडियो अदालतको बहस, प्रधानन्यायाधीशले दिए यस्तो जानकारी !
संसद पुनर्स्थापना गर्न रास्ट्रपतिले नै छोडिन यस्तो प्रमाण, अदालत मै खैलाबैला !
नेकपाको विधा नै भेटियो दुई थरी, स्वत यो समुहले पाउने भयो सुर्य चिन्ह !
प्रचण्डका गुरु वैद्य पनि ओलीकै पक्षम्म, तालमेल र पार्टी एकता गर्ने घोषणा !
पार्टी नै भिभाजन गरि ओली समूहमा जादै जसपाका यी नेता, महतो संग भयो यस्तो सहमती !
मान्छे हानेर भागे ओली सरकारका मन्त्री, घाईतेको अवस्था गम्भीर !
ओली र भुसालबीच मन्त्रिपरिषद्मै चर्काचर्की, यस्तो छ कारण !
कुलमानको बिदाइ पछि कार्यकारी निर्देशकमा लेखनाथ कोइराला नियुक्त
ओलीका यी विश्वासपात्रलाई अख्तियारमा ल्याउन यसरी हुदै छ रातारात सेटिङ